Qoys Masaari ah oo ka hadlay geerida haweeney da’ ah oo la sheegay inuu diley wiilkeeda(Daawo Sawiro) | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Caalamka Qoys Masaari ah oo ka hadlay geerida haweeney da’ ah oo la...
Qoys Masaari ah oo ka hadlay geerida haweeney da’ ah oo la sheegay inuu diley wiilkeeda(Daawo Sawiro)
Dhacdo xanuun badan oo laga argagaxo ayaa ka dhacday magaalada ku taalla woqooyiga dalka Masar ee Alexandria ka dib markii wiil uu dilay hooyadii oo 81 jir aheyd.
Dhimashadda Marxuumada oo la oran jiray Zeinab Al-Sayid Mahfood ayaa timid, ka dib markii wiil ay dhashay uu si xun u garaacay.
Shabakada Al-Carabiya ayaa qortay inuu hooyadaasi uu wiilkeeda garaacay illaa ay ka miyir beesho, wuxuuna falkaasi u sameeyey si uu u qanciyo Xaaskiisa oo la sheegay inay ku dirtay ka dib markii ay ka cabatay hooyadiisa.
Ninkan oo aan magaciisa la shaacinin ayaa la sheegay markii ay hooyadiisa miyir beeshay ay isaga iyo xaaskiisa u qado doonteen Baar ku yaallo meel aan ka fogeyn gurigooda.
Hase ahaatee dhiigga ka qulqulayey marxuumadda ayaa gaaray bannaanka qolkii lagu jir-dilay, waxaana arkay una soo gurmaday dadka deriska ah, kuwaasoo jebiyey qolkii lagu xiray Marxuumada, waxayna ula carareen Isbitaalka, balse waxay u geeriyootay dhaawacyadii uu wiilkeeda u geystay.
Wiilkii iyo Xaaskiisa ayaa markii ay ogaadeen waxa dhacay waxey isku dayeen inay baxsadaan, balse, Ciiddanka Ammaanka ayaa ku guuleystay inay xiraan.
Dhacdadan oo si weyn looga argagaxay ayey si weyn hadal hayaan dadka Masaarida iyagoo ku wadaagayo Baraha Bulshadda, waxayna dadku ku baaqayeen in wiilkaas ka mariyo ciqaab adag oo ugu gaarsiisan dil si looga jaasiyo dembiga weyn ee uu ku kacay.
Dhinaca kale. Rajaa al-Araby oo ah gabadha ugu weyn caruurta Zeinab as-Sayyid Mahfouz ayaa beenisay eedeyntan iyadoo ku tilmaantay dhimashada hooyadeed inay ka dhalatay dhiigbax gudaha maskaxda ah balse uusan dilin wiilkeeda.
Wararka sheegaya inuu dilay wiilkeeda ee lagu baahiyey baraha bulshada ayey ku tilmaantay iney yihiin kuwo lagu dilayo sumcada qoyskeeda.
Mar wax laga weydiiyay Rajaa dhaawaca indhaha ugu yiil hooyadeed marka laga soo qaaday guriga ayaa ku tilmaantay in hooyadeed ay dhulka ku dhacday isla markaana dhaawac ka soo gaaray ookiyaalihii ay xirneyd sidaasna uu ku dhaawaca.
Hase ahaatee dadka deriska la ahaa qoyska ayaa sheegaya iney maqlayeen geerida hooyadan ka hor buuq iyo qeylo ka taagan gurigooda, iyagoo shaki geliyey in Ookiyaale uu geysan karo dhaawaca hooyadan kaga yaalla wejiga.
Previous articleShirka Baarlamaanada wadamada ku jira Urur Goboleedka IGAD oo la soo gaba gabeeyay(Daawo Sawiro).
Next articleAl Shabaab Ayaa Soo Bandhigtay Saddex Nin oo u Dhashay Dalka Kenya oo Lagu eedeeyeen inay yihiin jawaasiis(Daawo Sawiro).
Salmaan Bin C/casiis ayaa xil ka qaadis ku sameeyay dhamaan Taliyeyaasha Ciidamada, kaddib wareegto uu soo saaray.